Mankalaza Ny Asa Mozika Sy Hatsikana An’ilay Mpikambana Tao Amin’ny ‘Les Luthiers’ Maty, Daniel Rabinovich · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Septambra 2015 15:18 GMT
Les Luthiers, Lutherapia, Euskalduna Jauregia, Bilbao, 1/3/2014. Sary nalefan'i Flows tamin'ny Flickr eo ambany fahazoandàlana Creative Commons CC BY-NC-ND 2.0.
Izay no nahatonga ny fahombiazan'ilay vondrona Arzantina mpanao hatsikana, Les Luthiers vao mainka nahavariana kokoa. Tao anatin'ireo taompolo efatra nisiany, vian-dry zareo ny nitrandraka ireo toepo iombonana tia hatsikana manerana an'i Amerika Latina sy ny Saikinosy Iberika. Noho izany, nalahelo tamin'ny fahafatesan'i Daniel Rabinovich, iray amin'ireo mpikambana mpanorina ny Les Luthiers, ireo olona manerana ny tany miteny Espaniola. Tamin'ny 21 Aogositra 2015 teo amin'ny 71 taonany izy no maty noho ny aretim-po izay nahazo azy efa fotoana elaela izay.
Ny fampiasany ny fiteny Espaniola ho fototry ny fihomehezana angamba no iray amin'ireo antony nampitombo ny lazan'io vondrona mpanao hatsikana io hatrany ivelany mihitsy, tafiditra amin'izany ny Ranomasimbe Atlantika. Lavitra ny hatsikana fanadalàna fotsiny, mananihany, mirona amin'ny resaka vetaveta sy maloto izay ahafantarana ny hatsikana Espaniola, mampiasa ny kilalaon-teny sy ny mozika ny Les Luthiers, ary nametraka karazana fotokevitra maro sahala amin'ny firesahana momba ny fisainana (psychoanalysis), matematika ary ny epistemolojia.
Ito misy resak'olon-tokana ahatsiarovana an'i Rabinovich amin'ny fiteny Espaniola, ahitàna ny kilalaon-teniny sarotra tokoa — filazàna diso ireo teny ao amin'ny mombamomba ilay mpamokatra tantara tsy tena misy, Johann Sebastian Mastropiero — izay tsy indray mandeha monja no tena nahalatsaka ireo mpijery :
Afaka mihoatra ny fetran'ny fiteny ihany koa ny hatsikan'ny Les Luthiers. Tsy avy amin'ny fiteny fotsiny ny mahatonga ireo hanihany sy fihomehezana amin'ny fampisehoany, fa avy amin'ny mozika ihany koa, ary indraindray tonga hatrany amin'ny matematika mihitsy. Mpakafy maro ao amin'ny YouTube no nandany ny fotoanany mba handika ireo fampisehoana malaza ho amin'ny fiteny Anglisy ho an'ireo mpijery iraisam-pirenena, manao fanamby amin'ilay fotokevitra taloha milaza fa tsy voavadika tsara ilay fampihomehezana:
Mónica Maristain, avy amin'ny gazety Meksikana Sin Embargo, nanangona ireo fotoana tsy foin'i Rabinovichy indrindra, izay milaza ampahany tsara amin'ny tantarany:
Tonga nifamory mba hanome voninahitra azy tao amin'ny Twitter sy YouTube ireo olona fanta-daza toy ireo mpanao sariitatra sy hatsikana: Liniers, Montt sy Soto :
Manohy ny fampisehoany Viejos Hazmerreíres ireo sisa tavela tamin'ny vondrona, satria, araka ny fanazavan‘ireo mpikambana, izany no sitrak'i Daniel Rabinovich– manohy manao izay hampihomehezana ny olona.